Dhiisi Maaloo Sitti Bariitee Jirti! | QEERROO
Uuumata Oromoo lafa isaa irraa buqisaanii darban. Lafa Oromoo si’a lama- sadii deebisaanii gurgurachuun badhaadhan .Namni Oromoo lafti isa irraa fudhatame balbala eguu fi kosii haruuf illee ayyaana dhoowwatanii akka kadhatu tahu godhan. Bara kana OPDOn illee dalaala taate lafa Oromoo gurgursiisuun waan argate irraa butachaa turte. Saamichi karaa hundaan godhamu uummata Oromoo hiyyumaa argee fi dhagee hin beekneef dabarsee keenne. Kana malee TPLF cinii fi bujalee fidee dhufte uummata Oromoo itti harcaaftee gita olaana taate Uummata Oromoo gadi ilaaluu jalqabde.
Utuu OPDOn ilaaltuu Onkololessa 2, 2016 ayyaana Irreecha Haroo Arsedee irratti Oromoonni 700 ol tahan guyyaa tokko itti dhuman. Dhiigni Oromoo akka bishanii dhagala’e sanaafiOPDOn itti gaafatama duraa qabdi. Dhumatii Calanqoo lamaffaa, ajjechaa Shamannee, Amboo, Balee , Harar bakka adda adda, Booranaa fi Shamboo keessatti kan itti gaafatamu OPDO dha. Erga uummata kana nutu si bulcha jedhanii nageenya isaafis kan itti gaafatamu isaan tahuu beekuu qabu. Ija OPDO duratti Uummatni Oromoo miliyoonni tokkoo ol tahu inni du’u du’ee kan hafe qe’ee isaa irraa buqqaa’ee akka hantuutaa karaa irratti hafe. Beelaa fi dheebuun , qabanaa fi buluqni , hiyumaa fi dhukkubni itti wal furaa jiraa. Uummata Oromoo gamoojii Balee , Hararii fi Boorana keessatti qongee dha’amee garaan isaa fi dhugdii isaa wajjin walitti gogee jiru nu duraa mul’achuu qaba. Gaaga’ama kana hundaa kan Uummata Oromoo irratti fide OPDO dha.